सुटुक्क त्यहाँ छिरे दुई शीर्षस्थ « Jana Aastha News Online
सुटुक्क त्यहाँ छिरे दुई शीर्षस्थ
प्रकाशित मिति : २९ बैशाख २०७५, शनिबार ०९:४९
यातायात व्यवसायीले सिण्डिकेट कायम राख्न पाउनुपर्ने भन्दै सार्वजनिक यातायातका साधन उपत्यकामा ठप्प पारेको दिन बिहानै निजी प्लेटको सवारीमा प्रचण्डको नयाँ निवास खुमलटार, धापाखेलमा अचम्मैसँग दुई विपरीत धारका नेताहरु एकैसाथ पुगेका छन् ।
बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव भलाकुसारी गरेर त्यसरी त्यहाँ गएका हुन् । प्रचण्डनिकट स्रोतका अनुसार सरकारसँगको सम्बन्धबारे उपेन्द्र अहिले निकै लिबरल देखिएका छन् । सरकारमा आउन, मोर्चा मिलाउन पनि तयार छन् । तर बाबुराममा भने हिच्किचाहट देखिन्छ । एमालेसँग मिलेर डिल गर्दा शक्तिशाली होइन्छ भन्ने पार्न पनि प्रचण्डले उक्त भेटघाटको आयोजना गरेका हुन सक्छन् । उपेन्द्रको चाहिँ कुरा के छ भने दुईवटा मन्त्रालय उनको लागि छुट्याइएको भए पनि आन्तरिक व्यवस्थापनमा समस्या छ । देखावटी कारण संविधान संशोधनमा लिखित प्रतिबद्धता भनिए पनि तीनवटा मन्त्रालयको माग हो । आफूलाई एउटा, सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठको लागि अर्को र तेस्रोचाहिँ नेतृ रेणु यादवको लागि नभई भएको छैन । त्यसो त उपेन्द्रलाई एक्लै प्रचण्डसँग वार्ता गर्न गाह्रो पनि छ ।
उनी पहिले माओवादी राज्यसमिति सदस्य थिए । त्यही बेला मातृका यादव र सुरेश आलेमगरहरुसँगै नयाँ दिल्लीमा पक्राउ परे । प्रचण्ड पनि त्यहाँ भेटिने कुरा थियो । तर, पूर्व सूचना पाएर हो वा अन्य कारणले उनी त्यहाँ नपुगेर मात्र बचेका हुन् । फेरि पक्राउ परेकामध्ये सुरेश र मातृकालाई थुनेर उपेन्द्रलाई मात्रै छोडियो । हो, त्यही बेलादेखि प्रचण्डलाई पक्राउन खोजेको आरोप उपेन्द्रमाथि छ । जयकृष्ण गोइतलगायत सबैलाई समेट्ने गरी एनजीओको रुपमा मधेसी जनअधिकार फोरम त माओवादीकै सोचअन्तर्गत बनाइएको थियो । पछि त्यसैलाई उपेन्द्रले आफ्नो बनाएका हुन् । त्यहींबाट तिक्तता बढ्यो । गौर काण्डमा २७ को हत्या, मधेस आन्दोलनमा एक–अर्कोसँग असहिष्णु व्यवहार प्रदर्शन भयो । अहिले एमाले र माओवादीको एकीकरणमा दुई अध्यक्षको एडजस्टमेन्ट (समायोजन) त हुने भयो तर माओवादी र एमाले दुवैतिर अरु वरिष्ठहरु दुईजना नेताको मात्र व्यवस्थापनले हुन्छ ? भन्ने प्रश्न गरिरहेका छन् ।
यता नियमका हिसाबले पनि पार्टी एक हुनुअगाडि नै दुवैतर्फको छुट्टै अधिवेशन भएर केन्द्रीय समितिले पार्टी मर्ज भएको जानकारी दिनुपर्न निर्वाचन आयोगको नियममा छ । केन्द्रीय समितिका ४५ सय जनामध्ये माओवादीबाट अब एकीकृत पार्टीको नेतृत्वमा रहने बढीमा डेढ सय जना होलान् । अरुले आफू नपर्ने भएपछि लाइन लागेर त निर्वाचन आयोगमा हस्ताक्षर नगर्लान् ! उपेन्द्रले पनि के कुरा बुझेको देखिन्छ भने आन्दोलनले संगठन त बन्यो तर त्यत्तिको भरमा सधैं पार्टी टिकाइराख्न सकिन्न, यसनिम्ति सत्ता चाहिन्छ ।